Tandindonin-doza ny fifidianana Mitsangana ny hetsiky ny olom-pirenena
Fanjakana manavakavaka Ankilabao ny faritra 11 ambiny…
Tamin’ny 20 febroary 2019 no najanona ireo Lehiben’ny faritra ka tsy afaka hatao mpisolo toerana mandrakizay fa tsy maintsy nandray fepetra, hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Rajoelina tamin’ny fandaharana manokana nataony ny alahady 6 oktondra teo. Izany no antony nanendrena ny governora.
Antoko politika malagasy « Tsy mihoatra ny 10 isa no manara-penitra »
Amin’ireo antoko politika Malagasy mananika ny 300 isa eto Madagasikara dia tsy mihoatra ny 10 isa no manara-penitra, hoy ny filohan’ny antoko politika Natiora,
Savorovoro eto amin’ny firenena Manaitra ireo rafi-panjakana ny Rohy
Manaitra ny fandraisan’andraikitr’ireo rafi-panjakana mahefa ny eo anivon’ny Rindran’ny Olom-pirenena Hiarovana ny Iaraha-manana (ROHY)
Antananarivo Renivohitra “Vitsy mpahalala ireo kandidà roa goavana”
Manana paikadiny amin`ny fiatrehana sy handresena amin`ny fifidianana ho ben`ny tanàna ireo antoko amin`ny alalan`ireo kandidàny amin`ny distrika samihafa.
Asan-dRagôva eto Analamanga Tsy mangarahara sahady
Nidina ifotony nanao fanadiovana teny Besarety Ragôvan’Analamanga na ny Governora Hery Rasoamaromaka ny talata 8 oktobra lasa teo.
Mpanara-maso ny fifidianana Safidy Nahazo famatsiam-bola 520 000 Euros
Anisan`ny mpiara-miombon`antoka akaiky amin`i Madagasikara amin`ny fanatontosana ny fifidianana rehetra eto amintsika ny Vondrona Eoropeanina.
Tanà-Masoandro Misy afera tsy mazava
Mitentina 2.575 lavitrisa Ariary na 650 tapitrisa Euros eo, izay manome antsasaky ny fitambaran’ny tetibolam-panjakana taona 2019 ny vola ilaina amin’ny tetikasa Tanà-Masoandro.
Teraka ny “Hetsiky ny olom-pirenena miady amin’ny hosoka sy ny hala-bato amin’ny fifidianana” eo anatrehan’ny hosoka sy tsy fahatomombanana maro. Miisa 684 ny fitoriana napetraky ny kandida nanerana ny Nosy ary 77 avy amin’ny Vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana na ny CENI.
Tsy nisy nojerena na iray aza ny fitoriana napetraky ny kandida rehetra, hoy i Henri Rakotomalala na Riribe isan’ireo ao anatin’ny hetsika. Fanapahan-kevitra politika ny an’ny HCC,. Tsy tomombana ny fifidianana nanerana ny Nosy ary tsy ny fifidianana depiote ihany fa hatramin’ny fifidianana filoham-pirenena, raha ny fanehoan-kevitra. Manana andraikitra ny olom-pirenena ka raikitra ny antso avo ataon’izy ireo ho an’ny olom-pirenena manerana an’i Madagasikara na antoko na kandida na olon-tsotra,… izay mahatsapa fa raha izao fifidianana amin’ny endriny hitondrana an’i Madagasikara izao dia hiteraka zava-doza ho an’ny firenentsika. Manentana ny rehetra ho avy hiatrika ny fihaonambe hatao etsy amin’ny Hotely Carlton Anosy ireo mpitarika ny alatsinainy 15 jolay. Asain’izy ireo ho avy ny fiarahamonim-pirenena, solombavambahoaka, loholona,… izay mahatsapa fa ilaina ny dinika mba hahafahana miatrika fifidianana vaovao sy madio ary milamina izy ireo ho avy eny amin’ny Carlton Anosy.